MukatiSales: Kutaurirana, Gadzika, Fungidzira uye Fungidzira Kutengesa
Kutaurirana, Gadzira, Gadzirira uye Fungidzira Kutengesa
China, Gumiguru 31, 2013 Muvhuro, October 18, 2021 Douglas Karr
MukatiSales.com's PowerSuite ™ ndiwo tungamira kupindura manejimendi chikuva iyo inopa zvikwata zvekutengesa nezvose zvavanoda kuti vagadzirise nzira yekutengesa iri kure uye kuisa kutengesa mukuwedzeredza. InsideSales.com zvigadzirwa zvigadzirwa zvakagadzirirwa kupindura zvinotungamira uye nemibvunzo nekukurumidza uye zvakakwana. Izvi zvinoita kuti vatengi vawedzere kuwedzera kushamwaridzana uye huwandu hwehuwandu, uye kutyaira kutengesa
Zvigadzirwa zveSalesforce CRM
PowerDialer ™ yeSalesforce - Mutauri ane simba kwazvo mumusika wakavakirwa chaizvo kumhanya muSalesforce CRM. Inoda iyo Salesforce CRM.
Dzvanya-ku-Dana ™ yeSalesforce - Dzvanya-Kusheedza ™ yeSalesforce inounza kutsvagisa-kutsvagisa uye tekinoroji yeInsideSales.com chikuva kune iyo Salesforce CRM.
LocalPresence ™ yeSalesforce - Iyo chete yenyika network yakagadzirirwa zvikwata zvekutengesa uye zvekushambadzira kuti zvinyatso kutengesa nekutengesa munzvimbo iyi kuburikidza nefoni, webhu uye email.
PowerStandings ™ yeSalesforce - PowerStandings ™ inounza inonakidza gamification element kune PowerDialer ™ yeSalesforce, uye zvakanyanya inovandudza rep performance.
PowerText ™ yeSalesforce - PowerText ™ inopa zviyeuchidzo zvekugadzwa, kutumira mameseji kamwe chete, kuteedzera, uye kuburitsa nhare mbozha vese vari mukati meiyo inotungamira SaaS CRM, salesforce.com.
Yakagadzirirwa Lead Management Platform - Ye-pane-inoda kutengeswa inotungamira manejimendi chikuva chine zvese zvekutungamira mhinduro maturusi aunoda kubata, kukodzera, uye kuvhara zvimwe zvekutengesa.
PowerDialer ™ - Iyo yakanyanya simba dialer pamusika. Yakagadzirirwa B2B uye yakaoma B2C kutengesa. Iyo PowerDialer ™ haingogadzirisi nguva yekufona, inogonesa mhinduro.
PowerInbound ™ - Zvese zvePowerInbound ™ nhare zvishandiso zveyakagamuchirwa inbound call centre. Inobatana neiyo PowerDialer ™ ye inbound / outbound kufona kusanganisa.
LocalPresence ™ neInsideSales.com - Yakabatanidzwa zvizere nePowerDialer ™, LocalPresence ™ inopa makambani kuvapo kwebhizinesi remuno mumisika inodarika mazana maviri negumi muUnited States.
Mhinduro Loop Ine ELF ™ - Yedu Response Loop sisitimu inoshandisa yakavakirwa-mukati "Electronic Labor Force ™" yehungwaru inotungamira kusimudzira uye kufambiswa kwebasa. Inotumira maemail, mafax, kuendesa nzira dzekutungamira, kuridza runhare, nezvimwe.
Kurekodha uye Kuongorora - Rekodha uye / kana kuongorora chero kufona. Yakakura yekudzidzira reps uye yehutano vimbiso.
JabberDog ™ - otomatiki mutauri wezwi meseji nhepfenyuro pamwe nesarudzo yekumira email kana nzira kune anorarama mumiririri.
Tags: dialermukati mekutengesahwacha.netkutungamirira kutarisirakuvapo kwenzvimbosimba dialerwashingtonderkutengesa kuongororakutengesa kurekodhakutengesa mhindurosalesforcevatengesi crmkufambiswa kwemabasa
20 Ecommerce Maitiro Ekuwedzera Holiday Kutengesa